နေတိုးအကြီးအကဲ နှင့် အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး တို့ ကဘူးလ်မြို့သို့ ရောက်ရှိစဉ် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား - သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + '
'; div.innerHTML = summary; } //]]>
သတင်းစာ နှင့် ဂျာနယ်
TV on Livestream
Voice of facebook
နေတိုးအကြီးအကဲ နှင့် အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး တို့ ကဘူးလ်မြို့သို့ ရောက်ရှိစဉ် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
အာဖဂန်တွင် ယခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုအားတွေ့ရစဉ် (ဓါတ်ပုံ-အင်တာနက်)
ကဘူးလ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ မြို့တော် ကဘူးလ်မြို့မြောက်ဘက်ခြမ်း ရှိ လေဆိပ်တစ်ခုအနီးတွင် စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်က ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခု နှင့် သေနတ်ပစ်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့သူများက ပြောကြားခဲ့သည်။
ကဘူးလ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ဝင်း မြောက်ဘက်ခြမ်း ရှိ ဂိတ်တစ်ခုတွင် နံနက် ၁၁နာရီဝန်းကျင်ခန့်က ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတစ်ဆက်တည်း သေနတ်ပစ်ခတ်မှုများ နှင့် လက်ပစ်ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း Mohammad Wasim က ဆင်ဟွာသို့ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းက ပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွားပြီးချိန်တွင် စစ်ဘက်ရဟတ်ယာဉ်များ သည် အဆိုပါ ဧရိယာ အပေါ်တွင်ပျံသန်းနေပြီး လေဆိပ်မှ ဥသြဆွဲသံကိုလည်း ကြားခဲ့ရကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အာဖဂန်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Najib Danish က ဟာမစ်ကာဇိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အနီးရှိ ဧရိယာတွင် ဒုံးကျည်ကျရောက်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သေဆုံးသူမရှိကြောင်း တွစ်တာ၌ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုသည် နေတိုးတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲ နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး တို့ အာဖဂန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေစဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင်လည်း ကဘူးလ်မြို့အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် နေတိုးတပ်ဖွဲ့၏ ယာဉ်တန်းကို ဗုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့် အာဖဂန်နိုင်ငံသား ၃ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သစ်ထူးလွင်မှ သတင်းများကို မလွှတ်တမ်းဖတ်နိုင်ရန်အတွက် အောက်က (F)follow ဆိုတာလေးကို click လုပ်လိုက်ပါ။ အမှန်ခြစ်(✔)လေးဖြစ်သွားရင် ရပါပြီ။ သတိ - follow အရှေ့မှာ အမှန်ခြစ်(✔)လေး ရှိနေပြီဆိုရင်တော့ follow လုပ်ပြီးသားမို့ပါ။ ထပ်လုပ်စရာမလိုပါဘူး၊
မှတ်ချက်ရေးသားလိုတဲ့ စာဖတ်ပရိတ်များ တောင်းဆိုချက်အရ ဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီ။ မှတ်ချက်များ ရေးသားနိုင်ပါပြီ။
အချိန်နဲ့ တပြေးညီ သတင်းများ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့facebook "like" ကို နှိပ်ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကို လည်း သတင်းများ ဆက်သွယ်ပေးပို့ နိုင်ပါသည်။
နောက်ဆုံးရ သတင်းများကို အောက်ပါ Tweets မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ Tweets ရဲ့ ဘေးဘောင်တန်းကို ဆွဲချပြီ မိမိတို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ သတင်းခေါင်းစဉ် အောက်က Link ကို နှိပ်ပြီ အပြည့်အစုံဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Tweets by @thithtoolwin
Voice of fb
အသစ်တင်သမျှ အချိန်နဲ့ တပြေးညီဖတ်ရှုရန် Like နှိပ်ပေးပါ
Nov 2018 ( 323 )
Oct 2018 ( 708 )
Sep 2018 ( 736 )
Aug 2018 ( 939 )
Jul 2018 ( 895 )
Jun 2018 ( 883 )
May 2018 ( 953 )
Apr 2018 ( 1075 )
Mar 2018 ( 1093 )
Feb 2018 ( 1061 )
Jan 2018 ( 1051 )
Dec 2017 ( 1012 )
Nov 2017 ( 918 )
Oct 2017 ( 1038 )
Sep 2017 ( 926 )
Aug 2017 ( 1032 )
Jul 2017 ( 972 )
Jun 2017 ( 1069 )
May 2017 ( 1077 )
Apr 2017 ( 1004 )
Mar 2017 ( 1006 )
Feb 2017 ( 883 )
Jan 2017 ( 970 )
Dec 2016 ( 972 )
Nov 2016 ( 967 )
Oct 2016 ( 962 )
Sep 2016 ( 869 )
Aug 2016 ( 1022 )
Jul 2016 ( 970 )
Jun 2016 ( 1008 )
May 2016 ( 1291 )
Apr 2016 ( 1096 )
Mar 2016 ( 1217 )
Feb 2016 ( 1257 )
Jan 2016 ( 1158 )
Dec 2015 ( 807 )
Nov 2015 ( 1158 )
Oct 2015 ( 1249 )
Sep 2015 ( 1168 )
Aug 2015 ( 1228 )
Jul 2015 ( 1242 )
Jun 2015 ( 1096 )
May 2015 ( 1132 )
Apr 2015 ( 1080 )
Mar 2015 ( 1177 )
Feb 2015 ( 994 )
Jan 2015 ( 1206 )
Dec 2014 ( 1184 )
Nov 2014 ( 1226 )
Oct 2014 ( 1413 )
Sep 2014 ( 1305 )
Aug 2014 ( 1244 )
Jul 2014 ( 1218 )
Jun 2014 ( 1135 )
May 2014 ( 1128 )
Apr 2014 ( 933 )
Mar 2014 ( 1026 )
Feb 2014 ( 854 )
Jan 2014 ( 914 )
Dec 2013 ( 924 )
Nov 2013 ( 1021 )
Oct 2013 ( 954 )
Sep 2013 ( 1105 )
Aug 2013 ( 1211 )
Jul 2013 ( 1135 )
Jun 2013 ( 1121 )
May 2013 ( 1077 )
Apr 2013 ( 760 )
Mar 2013 ( 883 )
Feb 2013 ( 823 )
Jan 2013 ( 921 )
Dec 2012 ( 874 )
Nov 2012 ( 749 )
Oct 2012 ( 707 )
Sep 2012 ( 630 )
Aug 2012 ( 745 )
Jul 2012 ( 683 )
Jun 2012 ( 591 )
May 2012 ( 655 )
Apr 2012 ( 700 )
Mar 2012 ( 809 )
Feb 2012 ( 854 )
Jan 2012 ( 722 )
Dec 2011 ( 675 )
Nov 2011 ( 562 )
Oct 2011 ( 447 )
Sep 2011 ( 253 )
Aug 2011 ( 243 )
Jul 2011 ( 65 )
Jun 2011 ( 130 )
May 2011 ( 132 )
Apr 2011 ( 58 )
Mar 2011 ( 15 )
အသစ် တင်သမျှ သတင်းများ အလို အလျှောက်ပို့ပေးပါမည်
တစ်ပတ်အတွင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများ
အင်းတော်မြို့နယ်တွင် ဆိုင်ရှင် အလုပ်သမအား သားမယားပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွား
မုနိမြီ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၂ အင်းတော်မြို့နယ်မှာ ပန်းသီးရောင်းဖို့ အကူခေါ်ထားတဲ့ အလုပ်သမကို ဆိုင်ရှင်ဖြစ်သူ က ၆ လာကြာသားမယားပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွားခ...
ကိုးပင်-သာဂရကားလမ်း၌ ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်နေသူအား ဆင်က အစွယ်ဖြင့်လိုက်ထိုး၍ သေဆုံး
ဆင်ပေါင်ဝဲ နိုဝင်ဘာ ၁၂ ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ် ကိုးပင်-သာဂရကားလမ်းတွင် နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်က ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်နေသည့် အမျိုးသား တစ်ဦးအား ဆင်က အစ...
စစ်တွေကနေ ရန်ကုန်ကိုသွားတဲ့ ဘင်္ဂလီ ၁၅ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
ရခိုင်ပြည်နယ် အမ်းမြို့နယ်၊ ကံမြင့်ကန် စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် သာသနာ အလံကိုထောင်ပြီး မောင်းနှင်လာသော ကားတစ်ီးပေါ်မှ ဘင်္ဂလီလူမျိုး ၁၅ ဦးကို ကယ်ရီ...
ပြိုင်ကားတစ်စီးမှ အရှိန်လွန်၍ ဆိုင်ကယ်အား တိုက်မိ လူ (၂) ဦး သေဆုံး
မန္တလေး ၉ နိုဝင်ဘာ မန္တလေးမြို့ အောင်မြေသာစံမြို့နယ် ၇၈ လမ်း နှင့် ၂၆ လမ်းထောင့် ကျုံးဘေးတွင် နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ နံနက် ၁၂ နာရီကျော်အချိန်...
ဒေါ်စုကို ချီးမြှင့်ထားတဲ့ဆု AI ရုပ်သိမ်းမှုအပေါ် တုံ့ပြန်ချက်များ
မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထိထိရောက်ရောက် ဖြေရှင်းဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှား...
ဆီးချို ရောဂါ ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘယ်လို ကာကွယ် နေထိုင်သင့်သလဲ
ဆီးချို မှာ အမျိုးအစား ၂ မျိုးရှိ ဆီးချို ရောဂါ ဆိုတာ တသက်လုံး ဝေဒနာ ခံစားရတဲ့ နာတာရှည် ရောဂါ တမျိုးပါ။ ဆီးချို ရောဂါ ကြောင့် တနှစ်မှာ...
အမျိုးသမီးအား ဓါးဖြင့်ထောက် ချစ်ခွင့်ပန်သူအား မဟာအောင်မြေမြို့မရဲစခန်းမှ ဖမ်းဆီးအရေးယူ
မန္တလေး၊ နိုဝင်ဘာ ၁၅ ၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီ ၃၀ အချိန် မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မဟာမြိုင် (၁)ရပ်ကွက်၊ ၆၉ လမ်း၊ ၄၃xသိပ္ပံလမ်းကြားတွင် လှို...
ပါတီတွင်းရော အစိုးရ အတွင်းပါ ပြုပြင်ပြောင်းလဲတော့မယ် အန်အဲလ်ဒီ
ပြီးခဲ့တဲ့ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်သင့်တဲ့ နေရာတွေ မနိုင်ခဲ့တာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကြောင့် ပါတီတွင်းနဲ့ တိုင်းဒေသြ...
မြန်မာ့အရေး မဲခွဲဆုံးဖြတ်မယ့် ကုလအစည်းအဝေး
၂ဝ၁၈ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့က ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ အစည်းအဝေး ကျင်းပစဉ်။ ဒီကနေ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှာ လူ့အခွင့်အရေးဆ...
အလုံမြို့နယ်၌ အင်ဂျင်ဝိုင်ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွင်း ဝင်ရောက်မွှေနှောက်ပြီး မန်နေဂျာဖြစ်သူအား ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည့် မျက်နှာဖုံးစွပ်လူစုမှ နှစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိ၊
ရန်ကုန် နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရန်ကုန်မြို့ အလုံမြို့နယ်၌ ယနေ့ ညနေပိုင်းတွင် မျက်နှာဖုံးစွပ်လူတစ်စုက ကုမ္ပဏီ အတွင်း ဝင်ရောက်မွှေနှောက်ပြီး မန်နေဂျြာ...
Copyright © 2014. သစ်ထူးလွင် သတင်းများ . သစ်ထူးလွင် အင်တာနက်တွင် ကြော်ငြာထည့်ရန်
Design by THIT HTOO LWIN . Published by THIT HTOO LWIN . Modified by myOpenware, web design and development company in Myanmar.
MyOpenAds online advertising network is the exclusive ad representative of ThitHtooLwin.com